राजनीति Archives - Nepal Times Online
राधाकृष्ण देउजानेकपा एमाले भित्र व्याप्त अधिनायकवाद , व्यक्तिवाद, हैकमवाद संगको संघर्षको जगमा निर्मित नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सामु अपार सम्भावनाहरु छन । राजनीतिमा व्याप्त भ्रष्टचार , अनैतिकता , वहुरुपियापण देखि वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनतालाइ लामो राजनीतिक जीवनमा कमसेकम आर्थिक इमान्दारिता , सदाचार र शिष्टाचारको व्यवाहारिक प्रयोग गर्दै आउनु भएका माधव नेपालको नेतृत्वमा देश भरका […]
Posted on September 16, 2021 September 16, 2021 Author USER-1	Comment(0)
खगराज अधिकारी गृहमन्त्री हुना साथ लामो समय देखि रोकिएको नेपाल प्रहरी डीआईजी को सरुवा भएको छ , गृह मन्त्रालयले ९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को सरुवा गरेको छ । (मेट्रो) मा सरुवा भएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा डीआईजी दिवेश लोहनी, १ नम्बर प्रदेशमा अरुण बिसी, बागमती प्रदेशमा पुरुषोत्तम कँडेल, गण्डकी प्रदेशमा प्रकाशजंग कार्की, […]
Posted on June 16, 2021 June 16, 2021 Author USER-1	Comment(0)
जंकफुड र साइबर अपराधबारे प्रशिक्षण
पोखरा, ८ चैतमोबाइल र इन्टरनेटको पहुँचले धेरै कुरा हातमै आइपुगेका छन् । छिनमै विश्वको हालखबर बुझ्न, आफन्तसँग सम्पर्क गर्न सजिलो भएको छ । ज्ञान र मनोरञ्जनमा हामी सिधै जोडिएका छौं ।यस्ता धेरै सजिला पक्षसँगै साइबर अपराध र जंक फुडको लत पनि बढेको छ । यसबारे सचेत बनाउन परिवार र समुदाय तहमै प्रयासहरु समेत थालिएका छन् […]
Posted on March 21, 2021 March 21, 2021 Author USER-1	Comment(0)
जेन्सी, ८ चैत । भारतका दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडू, पन्जाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक र हरियाणामा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ । संक्रमणलाई नियन्त्रमा लिन मध्य प्रदेशको भोपाल, इन्दोर र जबलपुरमा पूरै लकडाउन गरिएको जनाइएको छ । महाराष्ट्रको नागपुरमा आउँदो १८ गतेसम्मका लागि लकडाउन लम्ब्याइएको बताइएको छ । गुजरात र पन्जाबका केही सहरमा रात्रिकालिन कर्फ्यु […]
सरकारले दिएको १० लाख नलिने नवीन्द्रराज जोशीको परिवारद्वारा घोषणा ।
मस्तिष्काघात भएर नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत नेपाली काँग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीको परिवारले सरकारले दिने भनेको स्वास्थ्य उपचार खर्च नलिने भएको छ । जोशी परिवारले सरकारले दिने भनेको उपचार खर्चबापतको १० लाख रुपैयाँ स्वीकार नगर्ने उनका स्वकीय सचिव पुष्कर पाण्डेले जानकारी दिए । सरकारले गएको बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर जोशीको उपचारका लागि १० लाख सहयोग गर्ने निर्णय […]
यी पाँच नेतालाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको बैठकले पाँच नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । बालुवाटारमा शनिबार बसेको बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नेताहरु भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र रामकुमारी झाँक्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । यता, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले […]
मेषः मान्यजनहरुसँगको सम्बन्धमा सामान्य ति क्त ता उत्पन हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ ।पूराना मित्रजनहरु सँगको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । सवारीसाधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक झमेलाले सताउन सक्नेछ । बृषः आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई […]
पचण्डले भावुक हुँदै भने जरुरी पर्छ भने फेरि बलिदान दिन तयार छौँ !
काठमाडौं, १ फागुन । ‘आफ्नै आँखाअगाडि सहिदका सपना कुल्चिएको टुलुटुलु हेर्न सक्दिनँ । जरुरी पर्छ भने फेरि बलिदान दिन तयार छौँ,’ जनयुद्धकालीन पलहरु सम्झिँदै नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भावुक बने । फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित सहिद स्मृति सम्मान कार्यक्रममा सम्बाेधन गर्दै उनी भावुक बनेका हुन् […]
मोहन विक्रम सिंहले ठोकेरै भने हिन्दु धर्म र राजसंस्था फर्काउन खोज्नेहरु समाप्त हुन्छन् – (भिडियो)
जनताले हुदाँखाँदाको दुई/तिहाई बुहमत दिई बलियो बनाई दिएको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले दुई चिरामा विभाजन भएको छ । जसको नेतृत्व एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् भने अर्काे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका छन् । पार्टी विवाद समाधानको तहमा नपुगी संसद्लाई नमोट्ने अवस्थामा पुगेपछि नेकपाले विभाजनको रुप लिएको हो । त्यसपछिको अवस्थामा […]
दुई वर्षीया छोरीको आफ्नै बाबुद्धारा डोरीले घाँटी थिचेर ह’ त्या ।
माधव नेपाल नेतृत्वमा हुन्जेल वहाँबाट फाइदा लिने आज वहाँलाइ गाली ?
Posted on February 7, 2021 February 7, 2021 Author USER-1
भिडियो कन्फरेन्स मार्फत निर्देशन सम्बोधन सम्पन्न : गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा
Posted on January 5, 2021 January 5, 2021 Author USER-1